विधिवाट देशलाई चलाउन खोज्दा पनि विरोध भैरहेको छ - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
राजिव पहारी, गण्डकी प्रदेशका सभासद् । युवा संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष पहारी अहिले अमेरिका भ्रमणमा छन् । इलिनोइस राज्यको शिकागोमा आयोजित नेपाली सम्मेलनमा सहभागि हुन आएका थिए । उनीसँग सम्पादक सुरज भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
सरकारले कामवाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहन्छ ?
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । धेरैं राजनितिक व्यवस्था परिवर्तनपछि, यो व्यवस्था आएको छ । अवको वाटो भनेको विकास र समृद्दिको वाटो हो । मुलकले पनि २०१५ सालमा विपि कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसले दुई तिहाई वहुमतको सरकार पाएपछि बल्ल अहिले त्यो सरकार पाएको छ । २००७ सालदेखि अहिले सम्म व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा हामीले समय खर्चियौं । अव भने सबैंको साझा जिम्मेवारी भनेको विकास र समृद्दिको हो । त्यसलाई मुर्त रुप दिन अहिले स्थानीय, संघ र प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा अधिकांश सरकार रहेको छ । विकास र समृद्दिको लागि यो सरकारले काम प्रारम्भ गरेको छ । सरकारको निर्माण भएको छाटो समयमैं शुशासनको दिशामा सरकारले काम गरेको छ । कतिपय कामहरुको आरम्भ समेत भएको छ । हो जनताका धेरैं अपेक्षा र आशा यो सरकारप्रति रहेको छ, सरकारले छिट्टैं काम गरोस् अनि देश विकास र समृद्द भएको हेर्न पाइयोस् भन्ने जनताको चाहना छ । यसलाई यो सरकारले मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
जनताको अपेक्षा धेरैं छ, तर काम त त्यो रुपमा भएको छैन नि होइन ?
कुनै पनि सरकार निर्माण भएको चार पाच महिनाकैं अवधिमैं त्यो सरकारको समग्रतामा मुल्यांकन गर्नु उपयुक्त होइन । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छ, ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छ, ७ वटा प्रादेशिक सरकार छ, १ वटा संघीय सरकार छ, यी सरकारहरुका बीचमा अधिकारको बाडफाड गर्नु छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम राख्ने, राजधानी तोक्ने, आम्दानीको स्रोत खोज्ने देखि लिएर वजेट ल्याउने र विधि बनाएर जाने काम गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि वजेट ल्याएका छन्, काम भैरहेको छ । संघीय सरकारले पनि शुसासन ल्याउने, सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने तथा भएकालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, यी केही उदाहरणहरु हुन् यसलाई सकारात्मक रुपममा लिनुपर्दछ । तर पनि यो भन्दा तिव्र रुपमा जान जरुरी छ भन्ने हो, यो सरकार विगतको जस्तो सरकार नभएकाले यसले काम पनि त्यही अनुसारनैं गर्नुपर्नेहुन्छ ।
शुशासनको कुरा गर्नुभयो, अपराधिक घटना त झन् बढेको छ त ?
यो सरकारले अपराध न्यूनिकरण र दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्ने कार्यमा काम गरेको छ । कानुनी राज्यलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकारले काम गरेको छ । ३० वर्ष देखि कानुनी कठघरामा नआएका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सफल भएको छ । हो यो विचमा मानवीय मुल्य र मान्यतालाई नैं कुठाराघात गर्ने खालका बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढेका छन्, यो तितो यथार्त हो । दोषीलाई पक्राउ गर्न र पिडितलाई न्याय दिन प्रहरी प्रशासनले सकिरहेको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । प्रहरी प्रशासन यसमा गम्भिर बन्नैपर्दछ ।
यो सरकारले गलत गरे के तपाईहरुले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ त?
युवा विद्रोहका लागि वन्दुक बोक्ने मात्रैं होइनन् सिर्जनाका संवाहक पनि हुन् । युवाले सकारात्मक कामको जागरण गराउन जरुरी छ । गल्ती कमजोरी छन् भने पनि त्यो गल्ती कमजोरीलाई सच्चयाउन दवाव दिनु युवाको दायित्व हो । यो सरकारले केही आशा गर्ने ठाउ बनाएको छ, सुखद् संकेत दिएको छ, चिन भारत विच समदुरीको सम्वन्ध कायम गर्दै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी काम अघि बढाएको छ । युवाले देशभित्रनैं केही गर्न सकुन् भनी प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत दरमा रिण दिने कुरा जस्ता युवा मुखी विषयलाई वजेटमा राखी कार्यन्वयन गर्ने काम सरकारले गरेको छ । विकास र समृद्दिको लागि गर्नुपर्ने धेरैं समस्या समाधान गर्नका लागि त्यो अनुसारको काम यो सरकारले थालनी गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, राम्रो कामको स्वागत गर्छौ भने यदि कुनैं गल्ती कमजोरी भए निर्भकतापूर्वक त्यसको विरोध गर्छौ । सच्चाउन दवाव दिन्छौं ।
प्रधानमन्त्रीले ज्यूले अरिंगाल बन्न भन्नुभएको छ त ?
सरकारले गरेको राम्रो कामको समेत प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन । अर्को तर्फ योजनावद्ध ढंगले सरकारको कामलाई असर पार्ने काम भैरहेको छ । जस्तो भनौं जंगवहादुरको पालाको ऐनलाई विस्थापन गर्न वनाइएको मुलुकी ऐनलाई कार्यन्वयनमा लाने कुरामा समेत विरोध जनाइयो । जवकि त्यो पारित कांगेसकैं पालामा भएको हो , सहमती गरेको विषयमा समेत विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसले स्याल हुइया गर्ने काम गऱ्यो, सिन्डिकेट हटाउने देखि लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने तर्फ सरकार अघि बढ्दा कांग्रेसले विरोध गऱ्यो, अवरोध गऱ्यो । मुलुकलाई विधि तथा थितिवाट अगाडि वढाउन खोज्दा विरोधका विरोध भैरहेको छ । सरकारलाई असफल पार्न धेरैं कोणवाट काम भैरहेको छ । आलोचना रचनात्मक भन्दा पनि आत्मभत्र्सना गर्ने काम गरेको छ । लोकतन्त्र, विकास, समृद्दि र जनजिविकाको पक्षमा काम गर्दा पनि विभिन्न कारण देखाएर सरकार विरुद्ध प्रहार हुँदा त्यसलाई चिर्न लाग्नुहोस् भनेर पार्टीको अध्यक्षका हिसावले प्रधानमन्त्री ज्यूले भन्नुभएको कुरालाइ मैले अन्यथा लिएको छैन, यो समान्य हो यसलाई अन्यथा लिनुहुदैंन ।
पार्टी एकिकरण पछि युवाको भूमिका चाहि के ?
पार्टीको केन्द्रमा एकता भयो, प्रदेश जिल्ला क्षेत्र जनसंगठनमा नेतृत्व एकतावद्ध भएको छैन । सचिवालयलेनिर्णय गरेको दसैंको , अमुक व्यत्तिको चाहना भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकताका लागि भएको हो । क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशको नेतृत्वमा ल्याउदा, अधिकारमुखी विकास समृद्दिलाई समाधान गर्ने नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ, पार्टी एकता भएपनि तल नहुदा पार्टी परिचालित हुन सकेको छैन ।
प्रदेशलाई समृद्द बनाउने चाहि कसरी ?
गण्डकी प्रदेशमा धेरैं कुरा टुग्याएका छौं । प्रदेशको नाम, राजधानी टुग्यायौं, वजेट सर्वसम्मतीले ल्याएका छौं । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरी प्रदेशलाई समृद्द वनाउन खाका बन्दैछ । इो प्रदेश मात्रैं एउटा यस्तो प्रदेश हो जसले चिन र भारतको सिमालाई छोएको छ, यो दुई देशको व्यापारका लागि ट्रान्जिट वनाउन सक्छौं, कोरला देखि सुस्ता यो प्रदेशमा पर्छ । चिन भारत जोड्ने गरी फास्ट ट्रायक वनाउन वजेट छुट्याएका छौं । केही वर्षभित्रैं गण्डकी प्रदेशलाई समृद्दि प्रदेश वनाउन हामी लागेका छौं ।
पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ती त भाइरलन नैं बन्यो त ?
मुख्यमन्त्री ज्युले बोलेको कुरालाई ट्वीष्ट पनि गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा धेरैं पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन् । देशकैं पर्यटनको एउटा आधार बनेका पर्यटकीय क्षेत्रहरु यस प्रदेशमा रहेका छन् । राजधानी पोखराका कतिपय पर्यटकीय क्षेत्रहरु २४ घण्टा खुल्ला राख्ने कुरा आएको छ । यसै सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित पर्यटन बढाउने विषयको एक छलफल कार्यक्रममा उहालाई दिएको अभिव्यक्तिलाई ट्वीष्ट गरिएको हो । जस्तो भनौं लेक साइडलाई खुला गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छ । अहिले पनि मसाज वा अरु विभिन्न नाममा त्यस्ता गतिविधि भइनैं रहेको छ । यसलाई अलि व्यवस्थित गरौं भन्ने कुरा हो , कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्दा त्यसले अपराध पनि कम गर्छ, करको दायरामा ल्याउदा त्यसले प्रदेशको ढिकुटीमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई तिललाई पहाड वनाउने कुरा आयो । ज्स्तो अहिले थाइल्याण्ड किन चर्चित छ । त्यहा किन पर्यटक ओइरो लाएर जाने गर्छन् भन्दा सबैंलाई त्यो थाहा छ । सि, सन, सेक्स, श्यानका लागि थाइल्याण्ड प्रख्यात छ । विश्वका धेरैं शहरहरुमा यसलाई समान्य मानिएको छ । यसको अर्थ रेडलाइट खोलौं , अहिले नैं खोलौं, कर यसवाट वाहेक अरुवाट प्रदेश सरकारले उठाउन सक्दैंन भन्ने चाहि होइन । तर सत्य चाहि के हो भने जे अहिले बन्द वा अरु तरिकाले भैरहेको छ यसलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । रेड लाइट नैं खोल्नुपर्दछ भन्ने छैन, समाजलाई ग्राह्य हुने कुरा गर्ने हो । सबैंलाई सर्वस्वीकार्य हुने कुरा गर्ने हो, अहिले नैं रेडलाइट खोल्ने कुरा प्राथमिकता नैं होइन । वेरोजगारीको समस्या छ, योग्यता अनुसारको काम नपाएको अवस्था छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना र आवासको समुचित प्रवन्ध आम जनतालाई गराउन छ । यसका लागि सरकारले वाटोहरु खोजिरहेको छ । हामीले २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने भनेका छौं । ल्याउने मात्र होइन बसाई लम्ब्याउनु जरुरी छ । यसका लागि चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।
हामी समृद्द नेपाल बनाउन लागिरहेका छौं । विकास सहीतको नया नेपाल बनाउदैंछौं । यसका लागि एनआरएनएहरुको भूमिका पनि उत्तिकैं रहेको छ । सबैं सहकार्य गरेर मात्रैं त्यो संभव रहन्छ । एनआरएनएले नागरिकता लगायतका विषयमा उठाएका मुद्दालाई हाम्रो समर्थन छ । कुनैं वहानामा राज्यले यसमा अलमल्याउनु हुदैंन । नेपाल आउनुहोस् भनेर मात्रैं पनि हुदैंन, एनआरएनएको लगानीको संरक्षण गर्न राज्य लाग्नुपर्दछ । मुलुकलाई धनी बनाओं, समृद्द बनायौं भने यसले हामीलाई गर्व गर्ने ठाउ रहन्छ । देश धनी नहुदा हामीले पल पलमा दुख पिडा व्यवहोर्नुपरेको छ जो हामी सबैं अनुभव गरेकैं छौं । सबैं मिलेर विकास र समृद्द नेपाल बनाउन लागौं ।